Ahoana ny fanovana ny iPad ho efijery faharoa ho an'ny Mac? | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fanovana ny iPad ho efijery faharoa ho an'ny Mac?
Applelised | | iPad, Mac OS X, About us, Fampiharana hafa ho an'ny Mac, maro
Hatramin'izao dia mbola miara-miasa amin'ny iPad Pro ho toy ny fitaovana famolavolana, ho fanampin'ny endriny mahazatra amin'ny fanjifana votoaty izay fantatsika tsara rehetra. Mba hanaovana izany dia manandrana fampiharana vaovao foana aho ahafahako mahomby kokoa amin'ny asako.
Raha vao nitondra anao aho a fampiharana hanovana ny iPad amin'ny takelaka famolavolana tena izy amin'ny tena endriny Cintiq Amin'ny alalàn'ny Atropad, mizara vahaolana hafa azo ampiharina amin'ny famokarana anao aho, raha ny momba ny tontolo iainana Apple. Tokony ampiana izany ny fampiharana dia manohana ny fampiasana azy amin'ny solosaina Windows, fa amin'ity tranga farany ity dia tsy nanana "fahafinaretana" hanandramana aho, satria toa any Windows izy ireo dia mikendry ny hanao ny asako ho mpamorona endrika sarotra kokoa noho ny efa fanaony, na dia avelako ho an'ity lohahevitra ity aza ny lahatsoratra iray hafa.
Nandramako ilay fampiharana Duet Display, suite afaka mamela, araka ny nolazaiko, hanova ny takelaka Apple antsika, na iPad mini, iPad na iPad Pro, ho efijery faharoa na monitor ivelany ho an'ny Mac.
ity rindranasa ity dia manana refy vaovao rehefa ampiasaintsika amin'ny iPad Pro,
Koa satria ny fampiasana azy amin'ny efijery 9,7 na 12,9-inch, nampiana ny maha-marina ny Apple Pencil, dia ataovy misy dikany bebe kokoa ny asany raha azo atao.
Ity horonan-tsary navoakan'ny orinasa ity tranokala ofisialy Ho fanoharana indrindra ho anao ny famitana ny fahatakaranao ny fiasan'ny Duet Display. Ny orinasa resahina, dia injenieran'ny Apple taloha, toy ny fampiharana maro hafa ao amin'ny App Store.
Raha marina fa ny sasany amin'ireo tsikera nataon'ny mpampiasa, amin'ny endrika fanamarihana an'ity app ity, dia misy ifandraisany amin'ny fampiasana ny totozy eo amin'ny efijery iPad, izay etsy ankilany, dia toa fanemorana tokoa ny fampiasana ilay totozy eo amin'ny efijery iPad.n'ny iPad anay, raha jerena ny efijery mikasika an'ireo fitaovana ireo na ny Apple Pencil.
Ny iray amin'ireo fanakianana miavaka indrindra dia ny fehin-kevitra ambany izay haseho ny efijery amin'ny iPad Pro rehefa ampiasaina miaraka a MacBook, MacBook Pro na mitovitovy amin'izany, satria ny famahana ny efijery an'ny Mac dia ambany kokoa noho ny an'ny iPad Pro. Tsy hanome ireo olana ireo izany raha ampiasaina amin'ny iMacs farany.
Fihetsika iray hafa izay manontany tena anao rehetra ny mety ho tara na tara rehefa "mamindra" fampiharana iray amin'ny solosainao mankany amin'ny iPad; Eny, amin'ity fizarana ity, ny lagy dia saika tsy azo tsinontsinoavina, satria mandeha tsara ny fampiharana amin'io lafiny io noho ny hafainganan'ny fampitana ny fampahalalana amin'ny alàlan'ny tariby misy antsika izay ampiasaintsika isan'andro handoavana ny iPad, izay tsy maintsy ampifandraisina amin'ny solosaina voavaha mba hiasan'ny fampiharana. Mariho fa tsy hiara-miasa amin'ny Wi-Fi ity app ity, toy ny hoe nanao Astropad izy.
Antony iray mamaritra ny fanapahan-kevitra amin'ny fampiharana ity dia ny vidiny. Raha ny fahitako azy, vidiny 9,99 euro somary tsara, raha jerena ny fampielezana vokatra izay heverina ho fampiasana ahy ity fampiharana ity. Mampiasa azy isan'andro aho, ary manampy an'io Astropad, izy roa ireo dia lasa mpiara-miasa amiko roa lehibe rehefa mamolavola karazana atiny.
Raha fantatrao ny fampiharana hafa ampiasainao hampisehoana ny fahaiza-mamorona sy hampitomboana ny famokarana amin'io lafiny io, aza misalasala manome hevitra na hifandray aminay tamin'ny alàlan'ny Twitter.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iPad » Ahoana ny fanovana ny iPad ho efijery faharoa ho an'ny Mac?
Tonga tany Singapore avy eo am-pelatanan'ny American Express i Apple Pay
Manomboka milalao amin'ny habetsaky ny RAM an'ny MacBook Air i Apple aorian'ny fahatongavan'ny MacBook vaovao